Ime hazi Ihe Buru ụzọ | Martech Zone
Na izu a Edge nke Weebụ Ihe ngosi redio na pọdkastị, anyị na-atụle azụmahịa azụmahịa n'ịntanetị yana usoro ụlọ ọrụ ga-emerịrị iji melite ahịa ha n'ịntanetị. N'ime akwukwo ihe omuma anyi mere n'oge gara aga, anyi kesara, Ọrụ Data na Onlinezọ Ntanetị Purzụta, enwere aha ole na ole banyere ịhazi onwe ya na otu o si abawanye na-emepe, pịa na ntụgharị site na mkpọsa email. Mana ekwesighi oke na izipu ozi email gi, ekwesiri itinye aka na ihe omuma gi na ntanetị.
Nhazi nke onwe abụghị ụzọ iji nwalee, ọ bụ usoro egosipụtara oge yana oge ịbawanye ahịa. Ihe omuma ihe omuma a sitere na Sq1, ulo oru ndi okacha amara na ntughari, dabere na akwukwo ocha ha meputara Na-eme ka ahazi ihe dị mkpa.
Site na itinye ihe nkwado ngwaahịa iji chụpụ ohere ohere na ire ere na ịkwa akwa / izipu ozi sitere na data akụkọ ihe mere eme, ndị na-ere ahịa nwere ike ịme akwa ndị ahịa ka mma. Ha na-enwe ike ịkwalite ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị erere ma bulie iguzosi ike n'ihe ogologo oge. Ihe akaebe di na onu ogugu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60% nke ndị na-ere ahịa nwetara ROI mụbara mgbe ha mere ụlọ ahịa ha n'ịntanetị.
Ikwesiri ịhazi ebe ọ bụla ị nwere ike ịgụnye:
Ibanye na ozi ịntanetị ịkwọ ụgbọala na saịtị gị
Ozi ịntanetị azụmahịa nke na-enye ngwaahịa ndị na-arụkọ ọnụ yana nkwado nkwado site na ozi ịntanetị nkwenye
Nhazi onwe gi kwesiri imetuta nhọrọ igodo gi, ihu akwukwo na ugbo ahia gi na ebe nrụọrụ weebụ gi
Mepụta ọdịda peeji nke maka n'ọkwá na ikwugharị ahịa na abanye na
Ndepụta chọrọ; mee ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ịlaghachi ngwa ngwa na ngwaahịa ndị ha nwere mmasị na ya
Tags: ozi nkwenyeakakabaredenjikarịcha ntụgharịcouponahụmahụ ahịagosipụta mgbasa ozimbido peeji nkendu ndunavigationozi ịpu-in na emailkeonwenkwado deren'ọkwámegharia ndị ahịaimeghari zuoụgbọ ibu azụmahịaNJ1azụmahịa emailazụmahịa azụmahịaanatara ndepụta
Ogidi 3 nke Ahịa
Usoro Nkwalite Blog Site na Ndị Ọkachamara Marketingzụ Ahịa